Sawirka Maanta Dalka Ciraaq & Amaan Xumada Ka jirta. Daawo La Yaabkan
Sawirka Maanta Ay Idiin Soo Gudbinayso Shabakada Caalamiga ah Ee Oodweynenews Waa Dalka Ciraaq, Faah Faahin Uma Baahna Sawirka AyaaSawirka Maanta Dalka Ciraaq & Amaan Xumada Ka jirta. Daawo La Yaabkan I
Posted by i like somaliland at 1:06 AM 0 comments
Nin Australian Ah oo Wax Ka Dhiga Jaamacad Dalkaa ku Taala oo Gubay Qeybo Kamida Kitaabka Quraanka Kariinka ah oo Waliba Sigaar Ka Dhigtay
AUSTRALIA(somweb)- Subxaanallah: Nin u dhashay dalka Austaralia oo wax ka dhiga jaamacad dalkaa ku taala ayaa gubay qeybo kamida kitaabka quraanka kariinka ah isla markaana ka dhigtay Sigaar, Ninkan ayaa la sheegay inuu gubay kitaabka Quraanka ah iyo Buuga gaalada ee Bible ka isagoo
waliba labadoodaba ka dhigtay sigaar isla markaana sheegay inuu Tijaabinayo ka si wanaagsan u gubta,
Posted by i like somaliland at 1:00 AM 0 comments
Maamulka iyo Hawl Wadeenada Shabakadda Togdheer Waxay Idinku Hanbalyeynayaan Ciida Fidriga
maamulka iyMaamulka iyo Hawl Wadeenada Shabakadda Togdheer Waxay Idinku Hanbalyeynayaan Ciida Fidriga
maamulka iyo howl wadenada Ciid wanaagsan dhamaan bada dawadayaasha iyo akhristayaasha Togdheer News ee
kala duwan ee kala jooga dinida daafeheeda hadii DHALIYARO IYO WAAYEEL, ISLAAMO, ODAYAAL, WIILAL, GABDHO, GUURDOON, GASHAANTIMO,DOOBAB, SHABADO .
intaba waxaanu leenahay sanadka sandkiisa ku gaadha bash bash barwaaqo iyo dawdayaal , waxaan shaki ku jir in qof walba oo idin kamidi u ku farax san yahay damshadka iidal fidiriga ee maalinta bariha , Akhristayaal iyo dawadayaa lwaxaan idin xasuusinayana in aanu maalinka bari ah idin soo gudbin doona inta ugu badan sida looga iiday bolada dalka hadii alle yidha , inta ka horeysa aan ku wada naso heesa aadka udaca san ee aanu ugu talo galnay…….
o howl wadenada Ciid wanaagsan dhamaan bada dawadayaasha iyo akhristayaasha Togdheer News ee
Posted by i like somaliland at 1:46 AM 0 comments
MARKAB LAGA LEEYAHAY DALKA JARMALKA OO LAGA BADBAADIYAY BUDHCAD BADEED SOOMAALIYEED.
ADEN(som web)- Ciidamada Maraykanka ee ku sugan xeebaha Soomaalida ayaa ku guulaystay in ay ka badbaadiyaan budhcad badeeda Soomaalida markab xamuul ah oo laga leeyahay dalka Germany. Budhcad badeeda Soomaalida ayaa mudo labaatan saacadood ah waxay ku jireen gudaha markabka kadib markii shaqaalaha markabku ay ku gabadeen khan hoose. Kooxda afduubka la maaganayd markabka ayaa baadi doon dheer u galay in ay helaan shaqaalaha markabka, xataa si ay u helaan shaqaalaha macduunka ku noqday waxay budhcad badeedu la xidhiidheen shirkada leh markabka oo fadhigeedu yahay dalka Germany.
Posted by i like somaliland at 1:37 AM 0 comments
Posted by i like somaliland at 1:30 AM 0 comments
Al-shabaab: Talibaanka Soomaaliya
Posted by i like somaliland at 11:35 AM 0 comments
Shandaranley: Qiso Jacayl Oo Qiimo Gaara Leh, Qaybtii 6-aad, Ha Moogaanina Halkii Ugu Darnayd Ayaa La Galaye!
Hargeysa (somalilandweb)- Habeenkaa ciyawoga wiiqda haya, jiriqaaga dhiidha haya iyo sawaxanka shimbiraha hareerihiisa ka shallaadaya ayaa wehel u ah. Balayax, habeenkaa socodkii kama jimcin, wuxuu ku talo jiraa inuu nuska hore ee habeenka ka gudbo soohdinta libaax galeenka badan.
Balayax, ma ahayn nin fulinimo lagu yaqaan, oo libaaxa ka baqa, habeenkaana wax hub ah, toorri buu sitay farolaabna waxa u ahayd, dhenged baarka hore feedhan. Waayo sida uu socdaalka ugu doqomaysan yahay ayuu hubkana nacas ka yahay. Libaaxa meesha uu marayo ku nooli, wuxuu libaaxyada jiidaha kale, ku nool dheeryahay waa Libaax dhadhamiyey hilib dad, oo wuxuu ku hororoobay colaado ka dhacay jiiddaa, oo uu hilibkooda cunay maydadka, raggii ay iska laayeen labada Col; Balayax, wuxuu saqda dhexe jeerrinka iyo qansaxa jilibka ku dhuftaba, mar qudha ayuu meel dhabarkiisa ku beegan, kamaqlay sanqadh iyo ci siba’an u hanqaadhaysa, ka dib ninkii Balayax, waxa kor iyo kal isku jebisay jidhiidhico ba’an dareen cabsiyeed ayaa isku gadaamay, xaadda jidhkiisa ayaa isla oogsatay, xubin kasta oo jidhkiisa kamid ah, waxa siidhi ku wargeliyey dareenka cabsiyeed ee saaqay.
Kubabka ilaa gacmaha waxa ku baahay firka nax cabsiyeed, garaaca wadnihiisa ayaa feedha bidix ka rugle, garray wuxuu inuu libaax yahay. Mar kale ayuu maqlay sanqadh tii hore ka yar oo u dhawaaqaysa (Fuu-Fuuf-Fuuf). Waxa weeye aar Libaax oo raadkiisa sanka la raacaya, waa bahal mamay oo uu hilibka dadku u soo hillaacayo. Balayax, cabsidii ayaa ku siikorodhay, ka dibna orod buu miciinsaday, libaaxii awelba orod buuku jiree, isna wuu eryaday.
Hase yeeshee, Balayax, habaq-habaqdii orodka ayuu xusuustay tabihii libaaxa la isaga difaaci jiray. Ka dib go,iisii ayuu hudhunka gacanta bidix ku duubtay, wuxuuna ku leexday guri madhan oo laga guuray, dabadeedna markuu arkay inaanu si kale ku baxsanayn ayuu geed oodda guri caska laga guuray ku dhexyaal degdeg u koray.
Libaaxii isaga oo goojinaya oo balayax raadkiisa sanka ku haya ayuu dhakhso u soo gaadhay balayax oo geedkii sii koraya, ka dibna cidiyaha ayuu la haabhaabtay, isaga oo gurxamaya, laakiin Balayax wuu ka baxsaday oo ma gaadhin libaaxii, ka dibna intuu geedkii dhakada uga baxay ayuu rako yar badhida saaray, gacmahana labo laamood oo kala durugsan ku kala cuskaday. Libaaxii intuu indhaha kor u laliyey, afkana kala waaxay ayuu geedka hoostiisa istaagay. Belaayo, kolba ta dambe ayaa darane, Balayax, oo geedkii fuushan oo is leh, belaayadii waad ka badbaaday iskanaeegaya inuu libaaxu ku soo boodo, ayuu hadana maqlay sanqadh kale oo geedka gebigiisaba wada ruxday, wuxuu maqlay shamamax, ur aad u qadhmuuna waa uriyey. Kor buu eegay, saa wuxuu arkay bahal mas ah, oo dabadu orgi le,ektahay oo madaxiisa balaadhka aad yaabto, oo intuu laan kale kaga soo gudbay gacantiisa soo dhaafay, aadna u miliqsanaya oo galaabi xiniya carrab labo faraarle ah, oo aad xadhig moodo.
Waxa labo iyo luqun modoobe aad u dhalay oo geedkaasi hoygiisa yahay, gurigana reerkii degaaba uga qaxay. Ninkii Balayax dhidid buurbuuran ayaa shax ka soo yidhi oo tin iyo cidhib qooyey. Ka dibna intuu balayax indhaha galka ka rogay, oo afku in taako le’eg kala tegay ayuu gacantii masku ka soo korayey si degdeg ah, kor ula booday, isaga oo qaylinaya oo firka naxsan, ayuu luquntii maska gacanta si xooggan ugu daafadeeyey, dabadeedna maskii ayaa dhulka u dhacay.
Culayska masku qof buu miisaan le’eg yahay, ka dibna meel Libaaxii u dhow ayuu gab ku yidhi, dabadeedna Libaaxii ayaa mooday ninkii geedka fuulay oo soo dhacay, ka dibna ku soo booday. Maskii iyo Libaaxii oo mid waliba cadhaysan yahay ayaa geedka hoostiisa daf is yidhi, Libaaxii wuxuu bahal qaniinyo ah ka buuxsaday adhaxdii maska, balse maskii ayaa isna miciyihiisii waabayda lahaa ku arooriyey dhegtii libaaxa. Ka dibna sidii ay isu haysteen ayey labadoodiiba naftu iskaga dul baxday. Balayax naxdintii ayuu ku qalalay laan geedka ka mid ah, welina cabsidii kama hadhin, waayo wax jawaab ah kumay soo celin oo ma oga inay labadii bahalba dhinteen. Dabadeedna habeenkii oo dhan, wuxuu ku tigtignaa geedka dushiisa, wuuna arkayey inay bahaluhu isku maran yihiin.
hablo wadaan awrtaas oo alaabo bendeka weyn laga keenay lagaga soo qaadayey meel tuulo ah, ka dibna Balayax awrkii buu ku xidhiidhsaday. Habalaha awrta wadaa way geeraarayaan, waxayna leeyihiin; “waar cadaawe-cadaawow, waar cadaawe halyeyow, Alla xaluu tiir ku xidhnaayoo, alla shaluutaagan ahaayoo, Alla maanta waa tub ku joogeey, ululu- lulu”. Luuqdaa baxsan iyo mashxaradaasi, waxay Balayax ka mash-quulisay su’aalo uu jidka isku sii waydiin lahaa, waxayse Balayax iyo awrkii Dhiddar, wadadu ku saddex noqotay, markii ay gabdhihii iyo xidhiidhii awrta ahayd, u leexdeen tuuladii ay ku socdeen.
Posted by i like somaliland at 11:16 AM 0 comments
Hees Cusub SOMALILAND‏: Midhihii Fu’ad Ibrahim Waberi , Laxankii iyo Codkii macaanaa ee Hobalkii caanka ahaa ee Abdinuur Daljir
Posted by i like somaliland at 11:13 AM 0 comments
SAWIRKA MAANTA BISAD HARAAD U GEEYAY IN AY KA CABTO KOOB BIYO KU JIRAAN OO KOR SAARAN MIIS HUDHEEL LAGA CUNTEEYO
Sawirka maanta Ay Idiin Soo Gudbinayso Shabakada Caalamiga ah Ee somalilandweb waa bisad ka mid ah bisadaha ku nool magaalada Burco oo xiligani biyo ka cabaysa mid ka mid ah hudheelada magaalada Burco waqtigaasi ay biyaha cabayso oo ah waqti ay ka kaceen miskaasi dad ku cuntaynayay. Ninba xeeladii ayuu ku xoogsanayaa sidaasi ayay miciin biday.
Posted by i like somaliland at 11:12 AM 0 comments
Dhacdooyinka somalilandweb: Wiil Mareykana oo 22 Jir Ah oo Ka Bad-Baaday Geeri Kadib Markii uu Kasoo Dhacay Dabaqa 39 Aad Daar Dheer oo Ku Taala Magaalada NewYork
NEWYORK(somalilandweb)- Wiil dhalinyaro ah oo mareykana ayaa kasoo dhacay dabaqa 39 aad daar dheer oo ku taala magaalada New York ee dalka mareykanka. Jariirada The New York Daily News ayaa sheegtay in wiilkaa oo 22 jir ah uu kasoo dhacay daruuraha samada New York laakiin xag alle uu ka bad baaday wiilkaasi dhimasho xaqiiq ah,
jariirada ayaa sheegtay in wiilkaasi uu ku dul dhacay gaadhi daarta hoos taagnaa isagoo waliba ku dhacay muraayada danbe ee gaadhiga. wiilkaa ayaa waxaa soo gaadhay dhaawacyo dhowr ah laakiin wuxuu tii alle kaga bad-baaday dhimasho layaab leh,
Dad goob joogayaal ah ayaa sheegay inay arkayeen wiilkaa oo lugihiisu soo laa-laadaan oo sidii filimaanta hawada ka soo socda laakiin nin kamida dadkaa arkayey ayaa jariirada u sheegay inuu gaadhigaasi sabab u ahaa noloshiisa oo hadii uu dhulka ku dhici dhici lahaa laga yaabo in arinku sidaa ka duwanaan lahaa,
Jariirada ayaa sheegtay in dhowr sanadood ka hor laba nin oo ah kuwa guryaha nadiifiya inay kasoo dhaceen dabaqa 47 aad ee daar dheer kuwaas oo mid kamida uu markiiba geeriyooday halka kii kalana uu ka bad baaday dhimashadaa isagoo ay soo gaadheen dhaawacyo jajab u badan laakiin ninkaasi uu dhakhtarka kasoo baxay isagoo bad qaba kadib markii lix todobaad lagu daweynayey,
Posted by i like somaliland at 11:09 AM 0 comments
Hargeysa: Ku Soo Dhawaada Barnaamij Qiimo Badan Oo Aanu Ka Diyaarinay Madarasaddii Kaalinta Koobaad Ka Gashay Tartankii Qur’aanka Ee Ramadaanta Oo Ah Markiz Mucalim Shukri + SAWIRO
sawiro Badan Oo Aanu Ka Diyaarinay Madarasaddii Kaalinta Koobaad Ka
Gashay Tartankii Qur’aanka Ee Ramadaanta Oo Ah Markiz
Mucalim Shukri + SAWIRO
Iyada oo ay muhiim tahay in la dhiirigeliyo cid kasta oo
ku hawlan kor-u-qaadista, weynaynta iyo barista Qu’aanka
ilaahay ee munazalka ah, ayaa barnaamijkan waxa aanu
idiinku soo gudbin doonaa barnaamij gaar ah oo aanu ka
soo diyaarinayay Madarasaddii kaalinta koobaad ku
guulaysaray tartankii qur’aanka Kariimka ee Ramadaan
walba loo qabto xufaadda qur’aanka ee madarasadaha
qur’aanka ee da’ada yar ee gobolada Somaliland, isla
markaana qayb ka ah dadaalada kor loogu qaado muhiimada
qur’aanka iyo barashadiisa.
Markiz Macalim Shukri,
waa horyaalka madarasadaha qur’aanka ee Somaliland, waa
madarasad loogu magac-daray macalim-qur’aankii weynaa
Alle ha u naxariistee Macalim Shukri Xaaji Axmed oo ka
mid ahaa tiirarkii diinta Islaamka ee Dariiqada Xaaxi oo
ka tirsan Gobolka Oodweyne, isla markaana waa
madarasaddii ay ka socdeen saddex Arday oo kaalmihii ugu
sareeyey ka galay tartankii Qur’aanka Kariimka ee
Ramadaantan. Waa kaalinta koobaad 30-ka Jiz oo uu galay
wiil yar oo 12 ah laguna magacaabo Cabdirisaaq Kayse
Maxamed. Sida oo kale kaalinta koobaad ee tartanka
Hablaha oo Hargeysa lagu qabtay waxa ku guulaysatay
Maryama Cabdilaahi Ibraahim. Kaalinta labaad-na waxaa ku
guulaysatay Hana Asad Daahir.
Sidaa darteed, waxaa
maanta noo suurta gashay inaanu booqano xarunta Markizka
Macalim Shukri oo ku taala Xaafada new Hargeysa ee
magaalada Hargeysa, waxaana aanu halkaa kula maalulaha
Markiz Macalim Shukri Cabdifataax Macalim Shurki Xaaji
Axmed, qaar ka mid ah macalamiinta, waalidiinta iyo
Ardayda kaalamaha sare ka galay tartankii qur’aanka ee
Ramadaanta ee ka tirsan Markizka.
Ugu horayn waxa aanu
xog-waraysi ku saabsan Markizka la yeelanay maalulaha
Axmed, waxaana uu hadalkiisa ku bilaabay sidan “Marka
hore waxa ay mahadi u sugnaatay Ilaahay, marka xigta
qolodan Oodweyenew.com ee uu inagala joogo Cabdishakuur
[Heersare] iyagana aad iyo aad ayaanu ugu
halmabalyaynaynaa khidmaynta ay u khimaynayaan Kitaabta
ilaahay iyo sida ay ula socodsiinayaan dadka arrintan
qiimaha badan ee ka dhacday caasimada Somaliland ee
Waxa uu intaa raaciyey
oo uu yidhi “Intaa ka dib Markizka Macalim Shukri waxaa
la asaasay 3-dii bishii sagaalaad ee 2005-tii, imika
waxa aynu joognaa 2-da bishada sagaalaad ee 2010, taas
macnaheedu waxa weeyaan Markiz-ku waxa uu jiray 5 sano
oo hal maalin la’a. Markizku gelin hore iyo mid dambe-ba
wuu furan yahay, waxaana lagu bartaa Kitaabka ilaahay
iyo tarbiyada caruurta. Waxaana wax ka barta 825 Arday.
Waxaana uu ka kooban labada qaybood oo kala ah; qayb
xifdiga qur’aanka ah iyo qayb nidaami ah. Waxaana aanu
ugu talo-galay in Ardaydu laba sano ay Qur’aanka ku
Cabdifataax Macalim Shurki
waxa uu tafaasiil ka bixiyey sidii ay ku soo bilaabantay
guulihii ay daraydu ka soo hoynayeen tartannada
Qur’aanka, “Bishii todobaad ee Ramadaanta ka horaysay
waxaa halkan [Hargeysa] ka qabsoomay tartan Qur’aanka
kariim ah oo ay qabatay Raabidatu Caalamu-l Ismaami [Hay’adda
samafalka caalamiga ah ee Islaamka], kaas oo sannad
kasta Hargeysa laga qabto. Markaa sannadkan tartanku
waxa uu u qaybsamayey saddex qaybood; qayb yar-yar, qayb
waa-weyn ah iyo qayb 30-ka Jiz ku tartamaysay. Markaas
oo laba Arday oo da’adoodu aad u yar-yar tahay toban oo
jiro ah ayaa waxa ay kuu laysteen kaalinta 1-aad iyo ta
labaad, waa Cabdibaasid Dayib Maxamed iyo Maxamed Axmed
Xuseen. Qaybta labaad ee iyaguna ku tartamaysay 30-ka
jiz, waxa kaalinta koobaad u galay Saleebaan Daahir
Cusmaan, oo dhamaantood Ardayda Markiz-ka ka tirsan.”
Ayuu yidhi Cabdifataax Macalim Shurki.
Waxaana uu intaas ku
ladhay oo uu yidhi “Markaa tartankaasi waxa uu ahaa
tartan caalami ah, oo Raabidatu Caalamu-l Ismaami waxa
ay soo dalbatay in Ardayga kaalinta koobaad galay iyo
waalibkiisaba ay cimro geeyaan, ilaahay fadligiisa way
kaxeeyeen oo way ku guulaysteen. Shan iyo toban cisho
ayay ku maqnaayeen beledkaa barakaysan ee Maka, tartan
caalami ah oo dhawr iyo soddon dawladood ku tartamayeen
ayuu Ardaygu [waa Cabdibaasid Dayib Maxamed] halkaas ka
soo galay, kaalinta labaad ayaanu ku soo guulaystay
ilaahay caqliga ha u barakeeyee.”
Waxa uu si gaar ah uga
hadlay tartankii ugu dambeeyey ee Ramadaantan qabsoomay,
waxaana uu yidhi “Waxa isla bishan Ramadaan gudaheeda
qabsoomay tartan ay Ardaydu lixda gobol ee Somaliland
isaga kala timi. Kaas oo ay maalgelinaysay shirkada
dahabshiil, oo aanu aad iyo aad ugu mahad-celinayno oo
run ahaan dhawr iyo toban sano la soo kifaaxayay. Waxaa
tartankaa kaalinta koobaad ee 30 jiz ee qur’aanka ah ku
guulaystay Cabdirasaaq Kayse Maxamed oo da’adii tahay 12
jir, waxa uu ku guulaystay inuu Somaliland oo dhan
goboladeeda kaalinta koobaad u galo, taasina waa fadli
xagga ilaahay ka ahaaday.”
Waxa uu weliba intaas
sii raaciyey oo uu yidhi “Waxa sida oo kale bishan
Ramdaan gudaheeda qabsoomay tartan hablo ah oo magaalada
Hargeysa lagu qabtay, kaas oo isna uu maalgeliyey
Dahabshiil, waxaa kaalinta 1-aad ee 30 jiz ku guulaystay
Maryama Cabdilaahi Ibraahim. Kaalita 2-aad-na waxa ku
gulaysatay Hana Asad Daahir, iyaga iyo waalibkooba waxa
aanu ilaahay uga raynaynaa inuu Jannada ku casuumo.
Inanta ag fadhida oo ah Maymuuma Cabdirasaaq Malin
Shukrin waxa ay ku guulaysatay kaalinta labaad ee
Hablihii ku tartamayay 10 Jiz. Sida oo kale waxa Masjid
Cali Mataan oo tartanka qur’aanku ka socday lagu qabtay
tartanada 10-ka iyo 5-ta Jiz oo ay maal-gelsay shirkada
Nationlink. Waxaana kaalinta 1-aad ku guulaystay Abshir
Asad Daahir oo ah Araydaa da’da yar. Dhamaan
waxyaabahaas oo dhami waa fadli xagga ilaahay ka ahaaday
ee xeelaad, karti iyo aqoon aanu dheernahay ummada maaha
kollay dadaal-na way ku timi.”
Dayib Maxamed Daahir
oo ah Aabaha dhalay Ardayga yar ee ka qaybta-galay tartanka
heerka caamali ah [Cabdibaasid Dayib Maxamed], oo isna
aanu dareenkiisa wax ka waydiinay ayaa aad ugu
dheeraaday muhiimadii uu tartankaasi lahaa, isaga oo
xusay in Ardaygu noqday tartamihii keli ahaa ee Soomaali
ah ee ka qayb-gala tartankaas, isla markaana waxa uu
sheegay in arrintaasi ahayd fursad wax-u-ool ah oo
sharaf u soo hoysay Somaliland.
Waxa kale oo uu
sheegay inay dareen ahaan aad u samaynayso heerka uu
wiilkiisa yari ka gaadhay darajada tartanka qur’aamka ee
heerka Caalami ah oo ah kaalinta labaad, isaga oo
tibaaxay inay farxaddaasi aanay isaga uun ku gaar ahayn
balse ay tahay mid waddanka oo dhami la wadaago. Isaga
oo ammaan iyo mahadnaq u soo jeediyey maamulka iyo
macalimiinta Markizka Macalim Shukri.
Sida oo kale waxa
isaga aanu dareenkiisa waydiinay Asad Daahir Xirsi oo ah
Abaaha dhalay Hana Asad Daahir iyo Abshir Asad Daahir,
oo labadooduna kaalmo sare ka galay tartankii Qu’aanka
ee Ramadaanta ee Somaliland, ayaa isna tibaaxay inuu aad
ugu faraxsan yahay guusha ay gaadheen awlaadiisu, isaga
oo tilmaamay inuu ilaahay ugu mahad-naqayo darajada ay
Waxa uu ku ammaanay
maamulka iyo macalimiinta Markizka Macalim Shukri inay
muujiyeen dadaal midho-dhal ah oo ku yasho muddan, isla
markaana aad iyo aad ayuu uga bogaadiyey qaadka
wanaagsan ee midha-dhalka ah ee ay Ardayda wax u
Barnaamijkaasi isaga oo
dhegaysi ah oo dhamaystiran ayaanu idiin soo gudbinaynaa
ee la socda.
Maamule C/fataax Iyo
Ardayad uu Walid u yahay. Maymuuna C/risaaq
Maryama C/aalhi Ibraahim
Oo Gacanta ku haysa Kitaab iyo Qalib is-akhriyaya oo
Jaa’isad loo siyey markii ay 30 Jiz ee Hablaha kaalinta
1-aad ka gashay
Sawiro Muuqaal kala duwan
Ciddii jecel inay hesho
macluumaad dheeraad ah, waxa ay la xidhiidhi kartaa
maamulaha Markiz Mucalim Shukri, Cabdifataax Mucalim
Posted by i like somaliland at 10:51 AM 0 comments
Raxan ka Mid ah Shaqalihii Ku-meelgaadhka Kastamada Kala-baydh iyo Wajaale oo Mar la wada Eryay
Gabiley (somalilandweb)- 12 ka mid ah shaqaalihii ku-meelgaadhka ahaa ee ka hawlgeli jiray kastamada Kala-baydh iyo Tog-wajaale, ayaa mar qudha shaqadii laga dareeriyey, kadib markii Agaasimaha cusub ee Waaxda Kastamada ee Wasaaradda Maaliyaddu amar ku bixiyey in shaqada laga joojiyo.
Sida ay xalay Jamhuuriya u xaqiijiyeen qaar ka mid ah shaqaalaha shaqada laga caydhiyey, waxa shaqaalaha la eryey oo tiradoodu dhan tahay 12 qof, kuwaas oo 7 ka mid ah ka tirsanaayeen kastamka Kala-baydh, halka 5 kalena ka shaqaynayeen kastamka Wajaale.
Shaqaalahan la eryey oo la sheegay in ay ahaayeen qaar ku-meelgaadh ah oo aan si rasmi ah loo shaqaalayn, isla markaana qaarkood ku sugnaayeen goobahaas muddo ka badan toddoba sannadood, ayaa ka biyo-diiday amarkaasi.
“Waxa shaqada naga eryey annaga oo muddo toddoba sanno ah ku shaqaynayey ku-meelgaadh Agaasimaha cusub ee Waaxda Kastamayada Mr. Cali Dhegoole, waxaannu erigayaga u cuskaday in aannu ahayn dadkii UDUB gaysay kastamyada, wxaannu shaqaynaynay toddoba sanno oo aannu bilaa mushahar ahayn, arrintanina nama qabato.” Sidaa waxa yidhi Farxaan Ibraahim Warsame (Walgo) oo ka mid ah shaqaalaha laga eryey kastamka Kalabaydh.
Wasiirka Maaliyadda Eng. Maxamed Xaashi Cilmi waxa uu dhawaan isagoo kaashanaya agaasimaha cusub ee waaxda kastamada hawlgeliyey shaqaalihii hore looga fadhiisiyey kastamyada cashuuraha dalka, isagoo dhinaca kalena soo saaray qoraal shaqada lagaga fadhiisinayo xubnaha aan gelin imtixaankii Wasaaradda Maaliyadda, waxana ka mid ah dadka arrintaasi saamaysay ee shaqada laga caydhiyey maamulihii uu isla wasiirku dhawaan u magacaabay Kastamka Abaarso.
Dhinaca kale, Wasiirka Maaliyadda oo aannu xalay isku daynay in aannu warkaas wax ka waydiino ayaanay noo suurtogelin in aannu ku helno telefoonkiisa gacanta.
Posted by i like somaliland at 11:33 AM 0 comments
Berbera: Goolaftankii Badhasaabka, Isdifaacii Wasiirka, Dooddii Xoor-xoor, Dardaarankii Maayarka
Berbera (somalilandweb)- Maareeyaha cusub ee Dekedda Berbera Mr. Axmed Yuusuf Dirir, ayaa si rasmi ah xilka ugalareegay Salaasadii toddobaadkan maareeyihii muddada 18-ka sanno ah soo maamulayay Dekedda Berbera Eng. Cali Cumar Maxamed (Xoor-xoor).
Munaasibadda xil-wareejinta oo ahayd tii ugu ballaadhnayd ee muddooyinkan dalka ka dhacda, waxa ka qaybgalay wasiirrada Kalluumaysiga iyo Maamulka Dekedaha, Waxbarashada, Diinta iyo Awqaafta, Caafimaadka, madaxda Gobolka Saaxil, kuwa Degmada Berbera, dhammaan masuulliyiinta kala duwan ee ka hawlgala laamaha dawladda ee Berbera iyo martisharaf kale oo aad u tiro badan.
Xafladda ay xilka kula kala wareegeen Eng. Cali Xoor-xoor iyo xisaabiyihiisii Madaxweyne Silaanyo u dallacsiieyey xilka culus Mr. Axmed Dirir oo lagu qabtay xafiiska Mareeyaha Dekedda Berbera, waxa ku xeernaa dareenno kala duwan iyo muuqaallo ka muuqday wejiyada madaxda tirada badan ee la martiqaaday.
Munaasibadda oo uu xidhiidhinayey Wasiirka Wasaaradda Kalluumaysiga, Khayraadka Badda iyo Maamulka Dekedaha Dr. Maxamed Yaasiin Xasan, ayaa ugu horreyn waxa uu hadalka ku soo dhaweeyey Maareeyihii hore ee Dekedda Berbera Eng. Cali Cumar Maxamed (Xoor-xoor) oo si mug leh uga warramay maexalladihii kala duwanaa ee ay soo martay Dekedda Berbera muddo 20 sannadood ku dhow oo uu maamulkeeda gacanta ku hayay.
Eng. Xoor-xoor oo noqday masuulkii u horreeyey maamulkii xukuumadda UDUB ee wareejiya hanti dawladeed, waxaannu madashaas kaga dhawaaqay in ay khasnadda dekedda ku jirto lacag dhan $275 kun oo doollarka Maraykanka ah, taas oo uu sheegay inay tahay dakhli uu soo xereeyey maamulkiisa xilka wareejiyey, arrintaas oo uu ku tilmaamay guul taariikhi ah oo uu xilka ku sagootiyey.
Waxa kaloo uu Maareeyihii hore sharraxaad ka bixiyey muhiimadda Dekedda Berbera ugu fadhido qaranka Somaliland, isaga oo carrabka ku dhuftay in 80% dhaqaalaha dalku ku xidhanyahay dekedda, mid dawladeed iyo mid shacab-ba, waxaannu xusay in ay ka hawlgallaan 1189 qof oo shaqaale ah.
Ugu dambayn, waxa uu ku dooday inuu isagu masuul ka yahay heerka wanaagsan ee dekeddu taagan tahay, sidaa darteed waxa uu Maareeyaha cusub ee xilka kala wareegay kula dardaarmay inuu halkaa ka sii wado hawshii baaxadda lahayd ee uu qaranka u hayay, waxaannu shaqaalaha iyo guud ahaan bulshada reer Saaxil ugu baaqay in ay si fiican ula shaqeeyaan maamulka cusub.
Maareeyaha cusub ee Dekedda Berbera Mr. Axmed Yuusuf Dirir oo xafladda uu xilka kula wareegay hadal kooban ka jeediyey, ayaa ka warramay muhiimadda dekeddu u leedahay dalka Somaliland iyo kaalintii wax-ku-oolka ahayd ee uu Eng. Cali Xoor-xoor ku hoggaaminayay maamulka Dekedda Berbera.
Mr. Dirir waxa uu sheegay in aanu ahayn qof ku cusub dekedda, balse uu ka soo shaqaynayay 13-kii sanno ee la soo dhaafay, sidaa awgeedna ay taasi u fududayn doonto gudashada masuuliyadda culus ee loo xambaariyay, waxaannu ballanqaaday in aanay waxba iska dhimi doonin heerka uu kula wareegay, isaga oo tibaaxay in uu wax ka qaban doono toosinta maamulka dekedda oo uu hoosta ka xarriiqay in wax badan ka khaldanaayeen iyo horumarinta adeegyada bulshada ee Gobolka Saaxil iyo degmada Berbera.
Sidoo kale, waxa uu maareeyaha cusub tilmaamay inuu xidhiidh wada-shaqaynneed oo joogto ah la yeelan doono maamulka Gobolka Saaxil iyo Degmada Berbera, taas oo uu sheegay in ay tahay ta keliya ee lagu gaadhi karo guusha iyo horumarka la wada hiigsanayo, waxaannu martida munaasibadda fadhiyay ka codsaday inay ugu duceeyaan in Ilaahay ku soo asturo gudashada masuuliyadda ballaadhan ee dhabarka loo saaray.
Badhasaabka Gobolka Saaxil Mr. Maxamuud Cali Saleebaan (Ramaax) oo wejigiisa laga dareemayay inuu si weyn uga biyo-diiday hadallo ka soo yeedhay maareeyayaasha xilka la kala wareegay iyo Wasiirka munaasibadda daadahaynayay oo ku saabsanaa masuuliyadaha iyo awoodaha maamul ee dhinacyada amniga Dekedda Berbera, ayaa ku hanjabay in aannu cidna u daba-fadhiisan doonin maamulka ammaanka gobolka, isla markaana maamulkiisu xaq ugu leeyahay dekedda Berbera bixinta dhaqaalaha lagu maamulayo nabadgelyada iyo horumarinta adeegyada bulshada.
Mr. Ramaax oo wejigiisa cadho ka muuqatay, ayaa masuulliyiinta hay'adaha ammaanka ee ku sugnaa madasha amar ku siiyey in laga bilaabo maanta ay shidaalka lagu sugayo amniga oo ay hore u weydiisan jireen maamulka dekedda ay si toos ah isaga ugu soo doontaan.
"Nabadgelyada gobolka annaga ayaa masuul ka ah, waana wax laga xishoodo in maamulka dekeddu yidhahdaan 'marka hawlo degdeg ahi soo kordhaan madaxda ciidammada ammaanku cidda ay u cararaan waa maamulka Dekedda Berbera oo annaga ayaa shidaalka siina.' Waxaan leeyahay taasi dib u dhici mayso, masuuliyiinta ciidammada amniga ee munaasibadda jooga waxaan farayaa in maanta laga bilaabo aniga [Badhasaabka] ayay ii soo doonanayaan, haddii aan wax kale u waayana ta qoyskayaga ayaan ka bixinayaa. Markaa waxaan leeyahay Berbera iyo Gobolka Saaxilba xaq bay u leeyihiin inay saami ka helaan dhaqaalaha qaranka Somaliland lagu maamulo ee ka soo baxa Dekedda Berbera, waxaanuna doonaynaa oo u taaganahay in aanu horumar gaadhsiinno adeegyada bulshada ee gobolka," ayuu yidhi Badhasaabka Gobolka Saaxil.
Hadalka goolaaftanka ee Badhasaabka Gobolka Saaxil oo sacab badan loo tumay, ayaa noqday mid wax badan ka beddelay jawigii madasha iyo muuqaallada wejiyada madax kala duwan, gaar ahaan Wasiirka Kalluumaysiga iyo Maamulka Dekedaha Dr. Maxamed Yaasiin Xasan iyo Maareeyaha cusub ee dekedda, kuwaas oo laga dareemayay inay si weyn u jidh diideen awood-sheegashada maamul ee uu la sara-joogsaday Guddoomiye Ramaax.
Wasiirka Kalluumaysiga, Kheyraadka Badda iyo Maamulka Dekedaha Dr. Maxamed Yaasiin Xasan oo isagu soo afjaray xafladda xilwareejinta oo ahayd mid ay buux-dhaafiyeen boqollaal qof oo intooda badani taagni ku dhammaystay muddo afar saacadood ku dhow oo xafiiska maareeyaha la dul-hoganayay, ayaa isaga oo daba jooga hadallada Badhasaabka waxa uu si cad uga dhawaajiyey in maareeyaha dekeddu masuul ka yahay sugidda amniga guud ee dekedda Berbera, awoodaasna aanay cid kale la wadaagin, waxaannu marar badan ku celceliyey in uu isagu yahay masuulka ugu sarreeya ee maamula dekedda, marka uu ka maqan yahayna maareeyuhu masuul ka yahay.
Maayarka Degmada Berbera Md. Cabdalla Maxamed Carab (Sandheere), ayaa isaguna dardaaranno kala duwan u guntay masuulliyiinta xilka la kala wareegay iyo guud ahaan shacabka reer Berbera oo uu ka codsaday in ay wakhti siiyaan maamulka cusub, lana shaqeeyaan, sidoo kalena aanay kula degdegin mucaaridad aan wax faa'iido ah u lahayn.
Waxa kale oo munaasibaddaa ka hadlay Maareeye-ku-xigeenka cusub ee Dekedda Berbera Mr. Cumar Abokor oo ku faanay inuu yahay nin reer Berbera ah, aadna ugu faraxsan yahay xilka loo magacaabay, isaga oo ballanqaaday in uu hawshiisa u gudan doono si daacadnimo ah iyo hagar la'aan ah.
Dhinaca kale, Mr. Cumar Abokor waxa uu shacabka reer Saaxil ku wargeliyey in isbeddelka ku yimi gobolka uu yahay mid guud oo saameeyey dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka, sidaa darteedna aanay u arkin mid shakhsiyaad gaar ah lagu beddelay
Posted by i like somaliland at 11:24 AM 0 comments
Xoghayaha Cusub ee Dawlada Hoose ee Hargaysa oo xilkii la wareegey‏
Hargeysa(somalilandweb)- Xoghayaha cusub ee dawlada hoose ee hargaysa oo maanta xilkii si rasmiha uga la wareegay xoghayihii hore xafladan xil wareejinta aya ka dhacday hoolka shirarka dawlada hoose ee hargaysa taasi oo ay ka so qayb galen masuliyin farabadan oo ay ka mid yihiin badhasaabka gobalka maroodijeex kusimaha duqa caasimada ahna kuxigeenka duqa mr maxamed c/laahi uurcade agaasimahasha dawlada hoose ee hargaysa gudomiyayaasha degmoyinka caasimada xgohayihi hore ee dawlada hoose shaqaalaha dawlada hoose iyo marti sharaf kale .
Posted by i like somaliland at 11:22 AM 0 comments
Xasiloonidda & horumarka Somaliland gaadhey & dhibaatooyinka ka aloosan Somaliya
“Waxaa Somaliland kajirta xasilooni, iyo horumaro dhaqaale, xasiloonidaasi oo aan kajiran South Africa & Cariga Mareykanka,tusaale ahaan, Mareykanka markaad istidhaahdid lacag kalabax machineka lacagta (ATM), waxaad kabaqeysaa in dhabarka lagaa toogto, halka Somaliland dumarku lacag ey isdulsaarsaareyn suuqyadda Hargeisa, halkan South Africa oo leh Dowlad kamajirto xasiloonidda kajirta Somaliland”Ahmed Dowlo, maamulka sare ee Jaaliyadda Ogaadeeniya ee K/Africa.Pretoria, Dr.Iqbal Jhazbay oo katirsan Jaamacadda weyn ee K/Africa (UNISA), oo islamarkaana ah khabiir kutakhasusey arimaha bariga dhexe & geeska africa oo uwehiliyo Prof.Chris Landsberg oo katirsan Jaamacadda Johannesburg & Machadka barashada siyaasada ee fadhigiisuyahey magaaloweynta Johannesburg ayaa bandhig cilmiyeed kusaabsan xasiloonidda, horumaradda dhaqaale, waxbarasheed, siyaasadeed ee kajira jamhuuriyadda Somaliland, & amnidaradda, dhibaatooyinka kahalosan Somaliya kusoobandhigey xarunta Jaamacadda weyn ee UNISA, 23 oct, waxaa kasooqeybgaley dad isugujira Mutacalimiin, Siyaasiin, Bahda Saxaafadda, Xubno katirsan Jaaliyadda Somaliland ee K/Africa, Jaaliyadda Ogaadeeniya ee K/Africa, Soomaali-kudhaqan K/Africa. Seminaarkan oo socdey 2 saacadood wuxuu Dr.Iqbal Jhazbay kufurey hadalkiisa
“waxaa arin aad loojecleysto oo kudayosho mudan ah marxaladaha Somaliland soomartey iyo sida ey uguguuleysteen in ey markii dagaalkii ey kulasoonoqdeen xoriyadooda ey kasoolaabteen sida ey Sulux iyo nabadgelyo waarta oo ilaa manta ey hoos hadhasanayaa umadda Somaliland (Reconciliation) ugadhexdhaliyeen qabiiladda kaladuwan ee Somaliland wada daga, arintani waa arin kudayasho mudan oo Africa & Caalamkuba ey tahey in ey kagadeydaan Somaliland”, Soomalidu waxey kumahmaahdaa Ama Buur Ahow ama Buur Kutiirsanow, mahmaahdan oo ey fahmayaan badi Soomaalida kasooqeybgashey Seminaarkan, Somaliya marka aad eegtid kumey guuleysan in ey sulux waara kadhaliyaan Soomaaliya inteeda kale, Somaliland waxey isticmaleen Guurti & Xeer hoosaadyo si ugusoodabaalaan nabad waarta cariga Sland, dhinaca dhaqanka Somaliland waxey leedahey dhaqan ey u isticmaalaan xalinta khilaafaadka, laakiin gumeystihii Talyaanigu Koonfurta Somaliya ugamuutagin dhaqan” Dr. Iqbal
Maruu kahadlayey dibudhiska (Reconstruction) waxa uu tilmaamey sida R.Somaliland ey caruur iyo ciroolaba, odey iyo islaan ey ugukaceen wadanka si ey dib ugudhislahaayeen, “markii iiguhoreysey ee aan tago Hargeisa waxaa arki karayey burburkii loogeystey Hargeisa, caasimadda Sland ee Hargeisa dhulka ayaa lalasimey, laakiin manta bilicda Hargeisa waa meelaha uguquruxdabadanleh ee mandaqadda Geeska Africa, kaalinta ey kaqaateen dumarka reer Somaliland dib u dhiska dalka Sland ayaa ah mid ey muhiimtahey in aan halkan kasheego, haweenka Somaliland waxey kaciyaareen kaalin libaax horumarka Somaliland, halka RAGU EY QAAD MEELAHAA LAFADHIYAAN dumarka Somaliland, dadka qurbaha kunool ee R.Slandna kaalinta uguweyn ayey kaciyaareen dib u dhiska dalka”Dr.Iqbal
Dhinaca diinta (Religion) wuxuu sooqaatey, in aan kacdoon sidii maxaakiimta Muqdisho aaney kadhalan Somaliland, waxey Sland kuguuleysteen in ey dimuqraadiyadda & diintu ey wada socdaan.
Ictiraafka (Recognition) ey Sland kasugeyso beesha caalamka waa mid ey aad uguhawlanyihiin dowladda iyo dadweynaha r.somaliland ee wadanka gudihiisa iyo qurbajooguba, “Somaliland waxey kuguuleysteen in ey xidhiidho diblomaasiyadeed lasameeyaan wadamo badan oo katirsan Qaaradda Africa, Europe, N.Americaba, K/Africa waxey ulamacaamiishaa Somaliland siheer sare ah, tusaale ahaan Meles Zenawiga Ethopia wuu jecelyahey in Somaliland la ictiraafo, laakiin wuu kayara warwareegayaa in Ethopia ey bilowdo in ey Sland ictiraafaan sababaha iyagoo kabaqsan in gobolo kamid ah wadankiisa ey gooni isutaagaan, markaa arintaa aad ayey ugataxadirayaan Ethopia, AU duna waxey u direen weftiyo kaladuwan oo xaqiiqo raadis ah,”Dr.Iqbal
Prof Chris oo kasocdey Machadka Barashadda Siyaasadda islamar ahaantaana kamid ah Jaamacadda Johannesburg wuxuu kuraacey Dr.Iqbal Jhazbay arimo badan oo uusoobandhigey, inkastoo dhaliilona wuu usoojeediyey Iqbal buuga uukaqorayo arimaha Somaliland, wuxuu Prof Chris tilmaamey in Somaliland ey gaadhey guulo lataabankaro dhinacyadda nabada, dhaqaalaha, siyaasadda, arimaha bulshadda, “waa arin kudayasho leh sida uu tilmaamey Dr.Iqbal, laakiin su’aasha meesha taalaa waxa weeyaan Sland sida ey kugaadhey horumaradan” isagoo kajawaabey Prof Chris wuxuu tilmaamey in Somaliland aan dibad lagasooweerarin, halka Somaliya dibad lagasooweerarey.
Gebogabadii Dr.Iqbal Jhazbay wuxuu tilmaamey in ey muhiimtahey in arimaha Somaliya xalintooda loodaayo dadka soomaalida, xalna in aaney marnaba noqonkarin in awoodo shisheeye ey xalka Somaliya iskudayaan xalintiisa.
Waxaa bilowdey su’aalo iyo falanqeyn kusaabsan mawduucan seminaarka, waxa su’aalahsi kamid ah hadii Somaliya & Somaliland ey dowlad Federal ah sameynkaraan, iyo su’aalo kale, waxaa iyana jirtey in kasooqeybgalayaasha soomaaliyeed ey canbaareeyno usoojeediyeen Iqbal Jhazbay.
Ahmed Dowlo oo kamid ah maamulka saree Jaaliyadda Ogaadeeniya ee K/Africa ayaa tilmaamey in “Waxaa Somaliland kajirta xasilooni, iyo horumaro dhaqaale, xasiloonidaasi oo aan kajiran South Africa & Cariga Mareykanka, Mareykanka markaad istidhaahdid lacag kalabax machineka lacagta (ATM), waxaad kabaqeysaa in dhabarka lagaa toogto, halka Somaliland dumarku lacag ey isdulsaarsaareyn suuqyadda Hargeisa, halkan South Africa oo leh Dowlad kamajirto xasiloonidda kajirta Somaliland” Ahmed dowlo, wuxuu ku canbaareeyey Iqbal jhazbay in uu katagey in uu waxkasheego, tusaale ahaan maamul goboleedka Puntland, xurgufta kataagan Sool, mustaqbalka Somaliland oo la ictiraafo iyo in gobolo kale ey iyaguna gooni isutaagi doonaan sida Somaliland.
Waxaa ugudanbeyntii halkaasi mahadcelin balaadhan usoojeediyey Dr.Iqbal Jhazbay & Prof Chris iyo dhamaan kasooqeybgalayaasha siminaarka Mudane kasocdey Jaaliyadda Somaliland ee K/Africa, mudanahan S.Mohamed, wuxuu kusoogabogabeeyey mahadcelintiisaa su’aal GEEDI SOCODKA ICTIRAAF RAADINTA SOMALILAND kusaabsan, “Dr.Iqbal Jhazbay, waxa aan aad u xiiseeyaa faalooyinkaaga iyo aragtidaada kusaabsan Somaliland, waxa aan aad u xiiseeynayaa dhinaca ictiraafka Somaliland ey kasugeyso beesha caalamka, Somaliland guulo caalamka oodhan wada ogyihiin ayey gaaadhey, casharo ayey tahey in lagabarto horumaradda Somaliland mana aha arin si sahlan ey kukeentey, walaalaheyga soomaaliyeed ee kasooqeybgaley seminaarkan iyo meelkasta oo ey joogaan soomaalidu waxaan kulatalinlahaa in ey Somaliland ey jiraan casharo waweyn oo ey lagabarankaro horumaradan ey gaadhey Somaliland, su’aasheyda waxey tahey ictiraafka Somaliland oo waqtiyadan danbe ey uloleynayaan xataa soomaali udhalatey soomaaliya, intee ayaa kahadhsan in ey beesha caalamku sibuuxda u ictiraafaan Somaliland”?
Prof Chris wuxuu tilmaamey isagoo mudanahaa R.Sland ujawaabaya in ictiraafka Somaliland aanu dhicidoonin xataa 5 sanee soosocda laakiin Dr.Iqbal Jhazbay wuxuu kabixiyey su’aashaasi rajo fiican oo aad u weyn.
Wadanka K/Africa oo ey kajirto xoriyatal qowl buuxa ayaa waxa wadankan kajira boqolaal iyo boqolaal hay’adood oo cilmibaadhis kasameeya xalinta khilaafaadka Africa kahaloosan, waxaa markaasi wiig kasta kadhaca wadankan boqolaal Seminar, markasta oo ururadani ey kahadlaan xasilooni waxey tusaale usooqaataan SOMALILAND, waxa isgaadhsiinta K/Africa ey aad wax ugaqoraan/siidaayaan/kahadlaan Somaliland & badhaahaha ey gaadhey.
Waxaa diyaariyey Saeed Furaa,
Ceelka Saliida ee Berbera oo ah ka-uguweyn ee Geeska Africa, waa sawiradda lagusoobandhigey Seminaarka UNISA.
Posted by i like somaliland at 2:48 AM 0 comments
Taliyaha Aan Weli Xilkii Wareejin Ee Ciidanka Booliska JSL Maxamed Saqadhi Dubbad Oo Ka Hadlay Beddalaaddiisa, Arrimo Qarsoon Oo Dhacay, Kuwo Taagan Iyo Qaar Kale
Hargeysa(somalilandweb)- Taliyaha Ciidamada Booliska Somaliland ee Shaqada ka sii tagaya Maxamed Saqadhi Dubbad, ayaa ka warramay guud ahaanba halka uu marayo amniga dalka Somaliland, Taliyihii Ciidamada Asluubta ee Gobolka Sool oo xalay fiidkii lagu dilay Laascaanood, waxyaabaha uu isleeyahay waa lagugu xasuusan doonaa marka uu xilka ka tago, walxo qarxa oo shalay iyo maalmo xigay lagu qabtay Hargeysa, dareenkiisa la xidhiidha beddalaadda lagu sameeyey, Niman Argagixiso u xidhnaa oo la sheegay in la sii daayey, Tuugta Middiyaha ku hubaysan ee soo badanaya iyo arromo badan oo kale.
Posted by i like somaliland at 1:09 AM 0 comments
Shandaranley: Qiso Jacayl Oo Qiimo Gaara Leh, Qaybtii 4-aad
)- Ma jiraan, waqtigaa waraaqo iyo telefoonno la isu diraa. Afkiisa mooyaane, af kalena amaano uma galo. Haduu doonaanla Cudbi Reerahooduna Balayax arkaan, lagama yaabo inay bixyaan, waayo Daanno weyn baa kala
dhex miranaysa labada qolo. Hase yeeshee Balayax ma aha nin ka negaanaya meel kasta oo ay Cudbi joogto. Goodaad, mark
uu hurdada sardhadii hore iska rogay wuxuu arkay Balayax oo fadhiya oo dhulka xariiqaya, kadibna Goodaad, wuu yaabay, dabadeedna intuu soo sare fadhiistay ayuu yidhi “Aabo maxaa ku helay oo aad la seexan wayday”. Balayax hore uguma jawaabin odayga, ee cabaar ayuu aamusnaa, waxaana qalbigiisa ku soo dhacay ereyo gabay ah, oo uu dareenkiisa kaga turjumayo inuu guurdoon yahay, wuxuuna holladay oo yidhi tixdan gaaban
Posted by i like somaliland at 1:08 AM 0 comments
Sawirka Maanta: Arbeekada Bilaashka ah ee Xayraamiinta
Sawirka maanta Ay Idiin Soo Gudbinayso Shabakada Caalamiga ah Ee somalilandweb waa Sawir muujinaya Dadka shaqo la’aantu hayso oo ku nool Magaalada Burco oo geed hoos hurda, Geedkan Hadhka wayn ee ay hoos hurdaana waxaa la yidhaahdaa “Arbeekada Bilaashka ah ee Xayraamiinta” .
Bal aan ku ladho sawirka baydad ka mid ah gabay uu tiriyay Abwaan Cumar Maxamed (Xiinwaal) waxaanu yidhi:
Qorraxdiyo kulaylaha dar uu dheehu qolofaystay
Oo saan qombobay baan sidii qaran wadaagnaaye
Sidii baan qalfoofkii u nahay qaro yaraantiiye
Qalbigiyo sidii baa wajiga qiiq ka karayaaye
Qaadiro sidii baa indhuhu nala qalloocaane
Qaawanaan sidii baa derbiga qubane jiifaaye
Qado li’i sidii bay wax badan maalmo qadayaane
Qufac iyo sidii bay darxumo weli qandhoodaane.
Posted by i like somaliland at 1:07 AM 0 comments
Wasiirka Diinta Iyo Awqaafta Somaliland oo Ka Hadlay Masaajid Uu Ku Sugnaa Oo La Sheegay In Laga Taageeray Al-shabaab
Hargeysa (somalilandweb)-Wasiirka Wasaarada Diinta iyo Awqaafta Somaliland Sh. Khaliil Cabdilaahi Axmed, ayaa beeniyay war ku soo baxay Wargeyska Haatuf ee ka soo baxa Hargeysa, oo sheegayay in Masaajid uu ku tukanayay oo ku yaala magaalada Hargeysa lagaga dhawaaqay in la taageero Kooxda Al-shabaab ee dagaalanta dalka Somalia.
Wasiirku wuxuu shirkaasi saxaafadeed ka akhriyay qoraal uu kaga jawaabayay warkaasi waxaanu u dhignaa sidan:-“Warka ku soo baxay Wargeyska Haatuf ee sheegayay in Aniga oo ah Wasiirka Diinta iyo Awqaafta aan fadhiyay masaajidka Hudda ee ku yaala kaalinta 8-aad ee magaalada Hargeysa, halkaasi oo wargeysku sheegay in laga taageeray kooxda Al-shabaab Aniguna aanan wax jawaab ah ka bixin, Waxaan u sheegayaa bulshada Somaliland ee xaqiiqada jecel inaanan fadhiyin masaajidkaasi oo aanan maqal warkaasi, hase yeeshee aan soo gaadhay salaadii witriga waxaanan fadhiyay markii Sh. Maxamed Cali Geeddi uu ka sheegay in cid jibaysani aanay ka hadli karin masaajidka iyagoo aan fasax ka haysan Guddida masaajidka iyo imaamkiisa. Anigoo gudanaya masuuliyada iyo waajibaadka I saaran waajibaadkaygana gudanaya waxaan ka hawl galay inaan xaqiiqadda ogaado.
Waxa ii caddaatay in qofkii ka kacay masaajidka uu aayadihii jihaadka ee lagu tukanayay salaatul laylkii uu inta uu jibooday u fasiray dadkii, hase yeeshee ma uu taageerin Al-shabaab iyo koox kale toona.
Wargeyska Haatuf cadadkiisii soo baxay 2430 ee soo baxay 15/08/2010-kii uu igu eedeeyay inaan Radio Hargeysa ka joojiyay qasaa’idkii nabi ammaanka ahaa, waxa kale oo ay igu eedeeyeen inaan aaminsan nahay madhabta Xambaliyada ee wahaabiyada, dhawaana aan soo saari doono amar aan ku joojinayo xuska dhalashada nabiga NNKHA, oo aan horseedayo khilaaf diineed, arrintaasina waa wax xaqiiqada ka fog.
Waxaan mar kale, waxaan dadweynaha reer Somaliland ee nabadda jecel ugu baaqayaa inay ka feejignaadaan wax allaale iyo wixii shaki ku abuuraya iyo khilaaf aan jirin ka dhex wada dalka iyo dadkaba. Kuwaasi oo ku caan baxay been abuur iyo isku dhufshada bulshada muslimka ah ee ka badbaaday khilaafka diineed ee ka jira mandaqada.
Posted by i like somaliland at 12:47 AM 0 comments
Warar Faah- Faahsan oo ka Soo kordhay Dilkii Taliyaha Asluubta ee Laas-Caanood
Laas-Caanood-(somalilandweb)-Taliyaha Ciidanka Asluubta ee gobolka Sool, Marxuum Cabdi Ciise Nuur, ayaa Caawa Fiidkii Koox
Hubaysani ku Dishay Gudaha magaaladda Laas-caanod, kuna Dhaawaceen Saddex ka Mida Ilaaladiisii.
Dableydan ayaa la sheegay inay taliyaha Dileen Wakhti uu ka soo Afuray Gurigiisa, oo Fulayaa gaadhigiisa, ka dibna deblaydaasi ku fureen Tacshiiradda Rasaasa, qoobtasna uu ku geeryooday Taliyaha Ciidanka Asluubta ee gobolka Sool.
Badhasaabak gobolka Sool oo Shabakadda Togdheernews kula Xidhiidhay Khadka Telefoonka ayaa ka gaabsaday inuu Wakhtigan Faah faahin ka Bixiyo Dilka Taliyaha, Balse wuxuu Cadeeyay inay Dilkan gaysteen Kooxo hubaysani, isle markaana lagu Dabo-joogo Raadkoodii.
Gudaha iyo daafaha magaaldda Laas-Caanood, ayaa waxaa gaafwareegaaya Ciidanka Qaran Soomaaliland, kuwaasoo Raadinayaa Kooxii falkan gaysatay.
Dilkan taliyaha ayaa si weyn looga Dareemay magaaladda Sool, isla markaana Dadweynuhu ka muujiyeen dareen Cadho-ah .
Falkan Dilka ah yaaa Noqonaaya kii u Horeeyay ee ka dhaca gobolkaasi, Tan iyo intii Xukuumadda Siilaanyo la Wareegtay Hogaanka Dalka.
Waxa kale, oo Dilkani ku soo beegmay Wakhti gobolkaasi loo magacaabay Masuuliyiin Cusub, lagana bedelay Kuwii Hore.
Madaxweynaha Cusub ee Soomaaliland Md Axmed Siilaanyo, ayaa dhowaan guddi Wasiiro ah u magacaabay gobolladda Bariga Soomaaliland, kuwaaasoo loo Xilsaaray Xal u Helidda Khilaafka ka jira gobolkaasi., Balse Wali may Hawlgalin guddigaasi, oo uu Madax ka ahaa Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliland Dr Maxamed Cabdi Gaboose.
Alle Haw Naxariistee Marxuun Cabdi Ciise Nuur, ayaa Sanadihii u Dambeeyey Madax ka ahaa Ciidaanka Asluubta ee gobolkaasi, si weyn looga yaqaanay Degaankaasi .
Posted by i like somaliland at 10:24 AM 0 comments
Berbera: Xil-wareejintii Dekedda Berbera
Berbera (somalilandweb)- Maareeyaha cusub ee dekedda
Berbera Mr. Axmed Yuusuf Dirir, ayaa shalay xilka kala
wareejiyay Maareeyihii hore Cali Cumar Maxamed (Xoorxoor).
Munaasibad loo sameeyay xilwareejintaas oo lagu
qabtay Berbera, waxa ka qaybgalay wasiirada
Kalluumaysiga, khayraadka Badda iyo maamulka Dekeddaha,
Caafimaadka iyo Waxbarashada iyo tacliinta sare,
badhasaabka gobolka Saaxil iyo masuuliyiin kale.
Ugu horayn, Maareeyihii hore ee dekedda Berbera Eng.
Cali Cumar Maxamed oo hadal ka jeediyay munaasibadaas,
waxa uu ka waramay waxyaabihii u qabsoomay muddo dheer
oo uu xilkaa hayay. “Waxaan ku faraxsanahay xilkan
Dekeda oo aan muddo soo hayey inaan isaga oo bad qaba,
isaga oo camiran, isagoo horumar ka muuqdo ku wareejiyo
Maareeyaha cusub. Arrinkaa dadku waxay u yaqaanaan shaqo
qof hayey oo uu ka tegayo, masuuliyadu way kala duwan
tahay, xafiisyada dawladana kuwa ugu tayada badan ayuu
ka mid yahay maamulka dekedu, waa meesha ilaa imika uu
ku tiirsan yahay dhaqaalaha wadanku hadday tahay mid
shacab ah iyo hadday tahay mid xukuumadda ahba, waa
meesha aynu dibadaha xidhiidh kala leenahay ee waxna
inooga soo degaan waxna ka dhoofaan, waliba waxay wax
badani u maraan wadamada jaarka ah oo ay ugu horeyso
wadanka Soomaaliya iyo Itoobiya, badeecado badan ayaa u
mara,” ayuu yidhi Mr. Cali Xoor-xoor. “Haddaan dib ugu
noqdo 2000-kii badeecadda mari jirtay waxay ahayd 500 oo
kun oo tan, imikana waxay ku dhawdahay milyan, taasi
waxay muujinaysaa inay jirto badeecada oo kordhaysa,
badeecad ma keeno wax ban ma dhoofino, laakiin hawsha
qabashadeeda, sahalkeeda, amaanadeeda iyo qof walba
badeecada uu leeyahay oo aanu gacanta ka saarno weeye,”
ayuu raaciyay. “Waxaan ahay dawlada ninkii ugu horeeyey
ee wareejiya lacag dhan 275-kun oo doolar, waxaana
farxad wayn ii ah inaan lacag intaas le’eg wareejinayo,”
ayuu yidhi Maareeyihii hore.
Maareeyaha cusub ee dekedda Berbera Mr. Axmed Yuusuf
Dirir oo isna hadal kooban ka jeediyay munaasibadaas,
waxa uu ka waramay xaddiga masuuliyada loo dhiibay.
“Maanta waxaynu halkan kula kala wareegaynaa masuuliyad
la odhan karo waa tii qaranka Somaliland ugu balaadhnayd,
waayo waxaan la wareegayaa hanti dhan 300 oo milyan oo
doolar oo noocyo kala duwan leh. Runtii waa masuuliyad
aad u wayn, dhinaca kale dekedu muhimad wayn bay u
leedahay qaranka, waa meesha wasaarada Maaliyaddu ka
hesho in ku dhaw 80% miisaaniyada qaranka, ma khaldana
markaa in la yidhaahdo waa 80% wadankii. Runtii
masuuliyada noocaas ahi waa mid aan dareensanahay, waana
mid aan ku khasbanahay inaan waajaho,” ayuu yidhi
Maareeyaha cusub oo sheegay in shaqada dekedda oo uu
dhawr iyo toban sannadood joogay aanu ku cusbayn.
Badhasaabka gobolka Saaxil Maxamuud Cali Hayste (Ramaax)
oo isna hadal ka jeediyay xilwareejintaas, waxa uu
sheegay in maamul ahaan ay ceeb ku tahay inay shidaal
iyo kharash ay ku hawlgalaan ka baryaan Dekedda iyo
Maayarka Berbera, iyadoo gobolku yahay ka dakhliga ugu
badani ka soo xeroodo. “Runtii aad baan uga xumahay,
anigu maalintii aan xilka la wareegayeyna waan sheegay,
marka Boolisku wax u baahdo wuxuu u soo doonanayaa
Dekedda, marka Badhasaabku wax u baahdo Maayarka ayuu u
soo baryo tegayaa, waana wax laga xumaado, waa gobolkii
ugu dhaqaalaha badnaa dalka, markaa ma baryeyno anagu,
Booliskayaguna ma baryaayo oo ah kuwa nabadgelyadu ku
dhisan tahay, ciidanka qaranka oo aanu imika
nabadgelyada u adeegsanaana ma baryayaan,” ayuu yidhi
Mr. Ramaax. “Waxaanu samaysan doonaa qorshe aanu ku
leenahay magaalada, xaqna aanu u leenahay oo aan qabo
inay dadka reer Somalilad sugayeen in la helo dawlad u
garata horumarinta magaalada,” ayuu yidhi guddoomiyaha
Ugu dambayn, wasiirka Kalluumaysiga, khayraadka Badda
iyo maamulka Dekeddaha Somaliland Dr. Maxamed Yaasiin
Xasan oo hadal ka jeediyay halkaas, waxa uu ka digay in
cid kale farogelin ku samayso maamulka dekedda Berbera.
“Dadkeena hoos waxa u eegayoow waxaad ogaataa eeg waxaa
maanta walaalaheena kale haysta ee dhibaato jirta iyo
sida laysku boobayo. Maanta 300 oo milyan oo dollar ayaa
wanaag iyo sharaf, isku qosol iyo walaalnimo aynu iskugu
wareejinaynaa waa inaynu ku faano,” ayuu yidhi.
Wuxuuna maamulka iyo hawlwadeenada Dekedda u soo
jeediyay inay wada shaqayn muujiyaan, si wanaagsana
loola shaqeeeyo maamulka cusub. “Waxaan ka hadlayaa
arrinta gobolka, Berbera wixii wanaageeda ah dekedani
kama gaabin doonto, waananu ku shaqayn doonaa hiil iyo
hoona waanu garab taagnaan doonaa, Badhasaabkana hore
ayaanu uga wadahadalnay, waxaan leeyahay dawladu waxay
ku siiso iyo dheeraadba waanu kuugu dari oo waanu kugu
kaalmayn, waana waajib. Dhinaca ilaalinta dekeda waad
ogtihiin oo waa halbawlaheenii, amniga dekedu waa waxa
ugu wayn, geeskan aynu ku nool nahay dhibaatada ka jirta
waad ogtihiinoo, waxaan ka rejaynayaa ciidamada qaranka
ee dekeda, Booliska, duqa magaalada, Badhasaabka in
amniga dekeda xil wayn la iska saaro, xilka la iska
saarayaana maaha inaad isbarbar yaacdaan, waxay ku
dhisan tahay wasaarad, wasiir bay leedahay, maareeye
ayey leedahay, nidaam bay leedahay, waa inaynu inagu si
walaalnimo meel uga soo wada jeedsanaa oo aynu u wada
shaqaynaa. Laakiin, aniga waxa iga wakiil ah Maareeyaha,
waana ka shaqada maalinlaha wadaya, qof waliba waa inuu
ogaadaa amniga dekedu wuxuu saaran yahay Maareeyaha, cid
kale oo ku farogelin karta oo aan Madaxweynaha ahayn oo
aniga I soo wakiilanaya mooyaane, ma jirto cid kale oo
dekedda soo farogelinkartaa, maareeyuhuna sida uu doono
ayaa loola shaqaynayaa, nin kasta oo Badhasaab ah ama
ciidan haystaana isaga ayuu kaga dambaynayaa,” ayuu
Sidoo kale, Maayarka magaalada Berbera Cabdalla
Maxamed Carab oo isna halkaas ka hadlay, waxa uu soo
dhaweeyay Maareeyaha cusub ee Dekedda Berbera.
Waxa kale oo iyana hadalo ka jeediyay xafladaas,
Maareeyihii hore ee dekedda Bile Xirsi Ciid iyo Maareeye
kuxigeenka cusub Mr. Cumar Abokor Jaamac.
Posted by i like somaliland at 10:15 AM 0 comments
SOMALILADWEB BURCO TOGDEER
Code 5: ku soo dawoow webkan waxaad kahelaysaa wayrar hufan faa faasan
veiw words from me
Welcome to my web!I hope you will find something interesting for you to read and to see here. Be free to tell me anything about my site or comment it as well. Thanks to visit this pages and come back soon it will grow up you'll see if You want to contact me my email addres is mubaarig22@hotmail.com and my phone number is 4335230 Telesom Burco
Somaliland space Aamiin's blog
Get the Somaliland is My Favourite Country widget and many other great free widgets at Widgetbox! Not seeing a widget? (More info)
Ka weydii Google
mubaarig cabdi risaaq
i like somaliland
somaliland is an independent countery that locates in the horn of africa
Sawirka Maanta Dalka Ciraaq & Amaan Xumada Ka jirt...
Nin Australian Ah oo Wax Ka Dhiga Jaamacad Dalkaa ...
Maamulka iyo Hawl Wadeenada Shabakadda Togdheer Wa...
MARKAB LAGA LEEYAHAY DALKA JARMALKA OO LAGA BADBAA...
Shandaranley: Qiso Jacayl Oo Qiimo Gaara Leh, Qayb...
Hees Cusub SOMALILAND‏: Midhihii Fu’ad Ibrahim Wab...
SAWIRKA MAANTA BISAD HARAAD U GEEYAY IN AY KA CABT...
Dhacdooyinka somalilandweb: Wiil Mareykana oo 22 J...
Hargeysa: Ku Soo Dhawaada Barnaamij Qiimo Badan Oo...
Raxan ka Mid ah Shaqalihii Ku-meelgaadhka Kastamad...
Berbera: Goolaftankii Badhasaabka, Isdifaacii Wasi...
Xoghayaha Cusub ee Dawlada Hoose ee Hargaysa oo xi...
Xasiloonidda & horumarka Somaliland gaadhey & dhib...
Taliyaha Aan Weli Xilkii Wareejin Ee Ciidanka Bool...
Sawirka Maanta: Arbeekada Bilaashka ah ee Xayraami...
Wasiirka Diinta Iyo Awqaafta Somaliland oo Ka Hadl...
Warar Faah- Faahsan oo ka Soo kordhay Dilkii Taliy...
Dadweynaha Magaalada Burco oo Markii Ugu Horaysay ...
War Deg-Deg:Taliyihii Ciidmada Asluubta Gobolka So...